2019 – Page6– ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ရှမ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၀၉၂၈၄၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၈ . ၁၉၈၁ (၃၅)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကော့ကရိတ်မြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဥပဒေဘွဲ့ (LL.B) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – အထက်တန်းရှေ့နေ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးအေးဝင်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နန်းစမ်းမြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	209 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောလှမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ခရစ်ယာန် ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/သတန(နိုင်)၀၀၁၃၇၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၀ . ၇ . ၁၉၅၅ (၆၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကော့ဒါန်ရွာ၊ ဒုံရင်း၊ ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – အ.ပ.ထ အောင် ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – မြေစာရင်းဦးစီးဌာန(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးစောမောင်မောင်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နော်စိန်သင်း(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	149 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးသန်းနိုင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၂၇၃၈၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၅ . ၁၀ . ၁၉၅၆ (၅၉)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ပညာရေးတက္ကသိုလ်(ပထမနှစ်)(၁၉၇၄-၇၅) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ကုန်သည် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးဘစိန်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နှင်းခြုံ (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	187 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၂၅၆၁၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၁၀ . ၅ . ၁၉၅၄ (၆၂)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – မော်လမြိုင်မြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စီးပွားရေး) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါက်တာစောလှထွန်း၊ပြည်နယ်ဥက္ကဌ(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်အမာ၊ မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 25, 2019 December 4, 2019 Author admin	232 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်(ကွယ်လွန်) ၂။ အခြားအမည် – ဦးချို ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/လဘန(နိုင်)၀၀၉၁၈၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၅ . ၁၉၆၁ (၅၅)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ရွှေဂွန်းကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – အမ်ဘီဘီအက်(စ်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးကျော်အေး(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သိန်းတင်၊ မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 23, 2019 June 10, 2020 Author admin	241 Views
ဒုတိယအကြိမ် အဆို/မေးခွန်းများ ( ၁၀-၄-၂၀၁၈ )
Posted on June 23, 2019 June 27, 2019 Author admin	94 Views
Posted on June 23, 2019 June 27, 2019 Author admin	100 Views
Posted on June 23, 2019 June 27, 2019 Author admin	84 Views